Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: २०६३ सालपछि सत्ता कब्जा गरेर बसेका माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसीलगायत अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईहरूका काम कुरा सुन्दा अब यिनीहरू बहुलाउन मात्र बाँकी देखिएका छन्
२०६३ सालपछि सत्ता कब्जा गरेर बसेका माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसीलगायत अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईहरूका काम कुरा सुन्दा अब यिनीहरू बहुलाउन मात्र बाँकी देखिएका छन्
२०६३ सालपछि सत्ता कब्जा गरेर बसेका माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसीलगायत अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईहरूका काम कुरा सुन्दा अब यिनीहरू बहुलाउन मात्र बाँकी देखिएका छन् । संविधानसभा भंग भइसकेपछि पनि यिनीहरूलाई लाज लागेन । सहमतिको नाममा यिनीहरूले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन जनआन्दोलन गरे । संविधानसभाको निर्वाचन पनि भयो । दुई वर्षको समयभित्र संविधान बनाउने लिखत गरे । दुई वर्ष बित्यो, संविधान बनेन । पटक–पटक गरेर अरू दुई वर्ष समय थपेर चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेपछि यिनीहरूले खाएको भत्ता, सुविधा सबै फिर्ता गरेर चुपचापसित घर फर्किनुपर्नेमा देशलाई पनि भौडीमा जाक्न खोज्दै छन् । वास्तवमा यिनीहरूले त जनतासँग क्षमा मागेर राजनीतिक सन्न्यास लिएर राजनीतिक धर्म निभाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, कोही अझै त्यही मरेको संविधानसभा ब्युँताउने कुरा गर्छन्, कोही संसदीय निर्वाचन र कोही फेरि संविधानसभाको निर्वाचन गरेर अझै ब्रह्मलुट मच्चाउन खोज्दै छन् । हुन त संविधान बन्न नसके भारतीय गुप्तचर संस्थाले बाबुराम भट्टराईलाई ०४७ सालको संविधानमा फर्कने र राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र र हिन्दू राज्यको ठाउँमा क्रिस्चियन राज्य गराउनु भनेको छ भन्ने कुरा पहिला नै सुनिएको हो । त्यसै धारलाई समातेर भारतीय पक्षधर हुन खोज्दै अत्तालिएर नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा ०४७ सालको संविधानमा फर्कने कुरा गरेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजे । त्यस्तो कुरा
गर्नेले किन हिजो ०४७ सालको संविधानलाई गैरसंवैधानिक तरिकाले फाले । आफूहरू असफल भइसकेपछि फेरि यिनीहरूलाई ०४७ सालको संविधान ? अहिले राजा ज्ञानेन्द्र जहाँ–जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ–त्यहाँ जनताको ओइरो लागेको देखेर प्रधानमन्त्री भट्टराई, सुजाता कोइराला र उनकै चाकरीदार कृष्ण सिटौलाहरू जे पायो त्यही बोल्दै छन् । तर हिजो गणतन्त्रका पक्षमा नारा लगाएर हिँड्ने नेपाली जनताले नै राजाको उपस्थिति र संरक्षण खोजेका छन् । कांग्रेसका गिरिजा, माओवादीका बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड तथा एमालेहरूले धोका दिएर राष्ट्रघात गरिरहेको टुलुटुलु हेरेर अब जनता बसिरहने छैनन् । प्रधानमन्त्री एउटा कुराको स्मरण गराउँछु कि केही समय पहिला माओवादी आन्दोलन भएकै समयमा मेरो लखनउबाट हरिद्वारतर्फको रेलवेमा भारतीय जनता पार्टी उत्तरप्रदेशका राजनीतिज्ञ चौधरी जयपाल सिंहसँग भेट भयो । भेटको सन्दर्भमा उनले भने, ‘नेपालका उग्रवादी राजनीतिक नेताहरूका कारणले यो क्षेत्र नै तनावग्रस्त बन्दै छ । नेपालमा राजा पनि शक्तिशाली, राजनीतिक दलहरू पनि शक्तिशाली नबनुन्जेल स्थायी शान्ति कायम हुन सक्दैन ।’ कतिपय भारतीय नेता नेपालमा प्रजातन्त्र र स्थायित्वका लागि चिन्तित देख्दा र यहाँका नेताहरूले यो देशको पहिचान र प्रतिष्ठालाई नकार्न खोज्दा मलाई आत्मग्लानि भयो । ०६३ सालपछिका सत्तासीन कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू नेपालको राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा नेपालको अन्धकार भविष्य देखिन्छ । नेपालका संसदीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आन्दोलनमा जनता होमिन्छन् तर आन्दोलनपछि हात लाग्छ शून्य । ०४६ सालपछि नै प्रजातन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिणत गराइयो भने ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि भाँडतन्त्र हाबी भएको छ । यसरी देश र जनतालाई धोका दिदै सत्ताको दुरुपयोग गर्ने जो हुन् तिनीहरूलाई कडा कारबाही नगरिन्जेल नेपालको भविष्य यकिन गर्न सकिँदैन ।
०६३ को आन्दोलन संसद्वादको सुदृढीकरणका लागि थियो कि साम्यवादका लागि थियो ? त्यो आन्दोलन एउटा निरंकुश शासनको विरोधमा अर्को अधिनायकवादी साम्यवादको स्थापनाका लागि त थिएन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका केही नेताहरूले राष्ट्रियताका संवेदनशील कुरामा विश्वसनीयता गुमाएका छन् । बहुलाएको मान्छेजस्तो एकोहोरो सहमति–सहमतिको रटान लगाएर नेपाली जनताको दिमाग खाँदै छन् । सबैलाई थाहा छ कि यिनीहरूका कुकर्मबाटै हरक्षेत्र अन्योलग्रस्त बनेको छ । आन्दोलनपछि राजनीतिक नेताहरूले छाती फुकाएर सडकमा हिँड्नुपर्नेमा अहिले चोरबाटो समात्न पुगेका छन् । ११ वैशाखमा राजासँगको सहमतिलाई मिचेर विदेशी गुप्तचर संस्थाको निर्देशनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरूले विवादास्पद अन्तरिम संविधान प्रस्तुत गरेर राष्ट्रलाई रणभुल्लमा पारेका छन् । एउटै संविधानभित्र संसद्वाद र साम्यवाद बोकेर हिँड्न सक्ने बहुलट्ठी बाटो अपनाउन खोजे । रुसमा गरिबीका कारणबाट साम्यवाद जन्मिएको थियो, राष्ट्रियताका कारणबाट होइन । राष्ट्रियता र गरिबी यी दुवै कारणबाट चीनमा साम्यवाद जन्मियो भने नेपालमा गरीबीको कारणबाट कम्युनिस्टको जन्म नभएर राष्ट्रियताको कारणबाट भएको हो । यस अवस्थामा हिन्दू तथा बौद्धको प्रजातान्त्रिक संस्कारको संस्कृति बोकेको नेपालले कसरी जडसूत्रवादी जनगणतन्त्र बोक्न सक्छ ? साम्यवादी खोल ओढेका क्रिस्चियनका दलालहरूले यो कुरा कसरी बुझ्न सक्लान् र ?
विभिन्न जातिलाई एउटै नेपाली जातिमा परिणत गराउनुपर्नेमा जातीय साम्प्रदायिक जन्जालमा माओवादीहरू फस्नु आत्मघाती खेल हो । हिटलर पनि आफूलाई देशभक्त ठान्थे । उनको विनाश यस्तै जातीय कारणले भयो । राष्ट्रको संवेदनशीलता बुझ्न नसकेकाले देशको स्थिति विकराल बन्दै छ । तर, माओवादीहरूले बुझुन् कि जातीय मुद्दा उठाएर र हतियार आतंकबाट प्रभाव जमाउन सक्ने अवस्था अब छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लडेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने हो भने माओवादीले राष्ट्रवादी मुद्दा उठाएर अगाडि आएको जस्तो सबैलाई चित्त बुझ्ने रचनात्मक बाटो समात्नु पर्ने होइन ? तर, नेपाल बिग्रिएको यहाँका भाट बुद्धिजीवीहरूको कारणले हो, त्यसमा बाहुन धेरै छन् । वास्तवमा संविधानसभा मरेपछि त्यसभन्दा अगाडिको बाटोमा फर्किनु कुनै राजनीतिक निकास हो । त्यसो भएकाले धेरै विश्लेषकले ०४७ सालको संविधानमा फर्केर निकासको बाटो खोज्ने कुरा उठाएका छन् । अत: राष्ट्रलाई निकास दिने हो भने राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्नु सबैको सहमतिमा भ्रष्टसत्ता र विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुँदै कडा अनुशासनको नीति अवलम्बन गर्ने बाटो समात्नुको विकल्प छैन ।
चिनियाँ यात्री हुयान साङले नेपालको भ्रमण गरी आफ्नो यात्रा वृत्तान्तमा भनेका थिए– ‘नेपालको राज्य व्यवस्थाले छिमेकी राज्यहरूमा आफ्नो प्रभाव कायम राखेको थियो । लिच्छवि कुलोत्पन्न क्षत्रिय राजा छन् जसलाई अनेक कुराको ज्ञान छ । यहाँ अंशु बर्मा नामका राजा थिए, यिनको प्रताप र प्रतिभाको कीर्ति टाढा–टाढासम्म विख्यात थियो ।’ यही क्रमले लिच्छविलगायत बाइसी, चौबिसी, मल्ल र शाह राजाले यस क्षेत्रको मौलिकता बचाएरै राखेका थिए । राजा महेन्द्र मल्लको समयमा तिब्बतमा नेपालको मोहर (मुद्रा) चलाउने व्यवस्थाको सम्झौतालाई निरन्तरता दिएर राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले छिमेकी राज्यहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहबाट तिब्बतमा अन्न, वस्त्र, सिक्का आदि निर्यात गरिन्थ्यो र सुन, नुन, भेडा, च्याङ्ग्रा आदि आयात गरिन्थ्यो । भोटबाट सस्तो भाउमा सुन ल्याउने र त्यो सुन भारतमा महँगोमा बिक्री गरी भारतबाटै सस्तोमा चाँदी खरिद गरी रुपियाँ बनाई भोटमा निर्यात गरिन्थ्यो । इतिहासका कूटनीतिक पाठ सिक्दै विश्वव्यापीकरण गर्ने अवस्थामा नेपाल अहिले आफ्नै अस्तित्वको लडाइँमा छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक र प्रजातान्त्रिक जीवनपद्धति ती राष्ट्रको भन्दा राम्रो थियो भने अहिले सत्तासीन कांग्रेस, एमाले, मधेसी र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईहरूले राष्ट्रघातको बाटोमा लागेर नेपाली जनतालाई बहुलाजस्तो बनाउन लागेका छन् । संविधानसभा समाप्त भएपछि अन्तरिम संविधानको पनि अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ । संविधानजस्तो कुरालाई यसरी विवादास्पद जबरजस्त सञ्चालन गर्न खोज्नु हुन्न । अहिले नेपाली जनता माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसीहरूदेखि आजित भइसकेका छन् । के देश यस्तै अनिश्चित तरिकाले विनासंविधान यिनै ०६३ सालपछिका भिडबाट चल्छ ? त्यसैले अब सबै देशभक्तले विदेशी हस्तक्षेप र व्याप्त भ्रष्टाचारको मुकाबिला गर्दै ०४७ सालको संविधानमै टेकेर राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको समन्वय र सन्तुलन कायम गर्दै रचनात्मक बाटो समात्न सक्नुपर्छ ।
Posted by www.Nepalmother.com at 9:01 PM